ओली सरकारको सय दिनः के–के गर्‍यो काम ? - Deshko News Deshko News ओली सरकारको सय दिनः के–के गर्‍यो काम ? - Deshko News
ओली सरकारको सय दिनः के–के गर्‍यो काम ?
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले एक सय दिन पूरा गरेको छ । यसअवधिमा सरकारले महत्वपूर्ण कामका रुपमा भारतसँगको सम्बन्ध सुधारलाई लिएको छ । अन्नपूर्णमा खबर छ ।
यसअवधिमा उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमणसँगै नेपाल(भारतबीच विभिन्न सम्झौता समेत भएका छन्।
यसबीचमा सत्ता साझेदारको रुपमा रहेको तत्कालिन माओबादी केन्द्रसंग पार्टी एकीकरण गर्दै प्रधानमन्त्री ओली शक्तिशाली एकीकृत पार्टी नेकपाका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । सरकारलाई आफ्ना नीति र कार्यक्रम लागू गर्न संसदीय शक्तिका हिसाबले सजिलो पनि छ।
भ्रष्टाचारको मामिलामा कबोल गरेअनुसारको नतिजा नआएकाले चुनोति पनि त्यत्तिकै रहेको प्रष्ट हुन्छ ।